တစ်ပုံစံနှင့်အတူရှည်လျားတို, ပိုး, ချည်, ကြိုးကို, အမျိုးအစားများ, မော်ဒယ်များ, မိန်းကလေးတွေ, calico အတူ rayon, မြက်ခင်း, ခွက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ် - လှပသော bedgown
Babydoll - အလှဆုံးနဲ့အဆင်ပြေမော်ဒယ်များ 50 ဓါတ်ပုံ
ဤသည်အထည်ချုပ်အားလုံးနီးပါးအမျိုးသမီးများဗီရိုထဲမှာလက်ရှိ nightgown ဖြစ်ပါသည်။ ဤအမှုကိုအိပ်စက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောအဘို့ဖြစ်၏သကဲ့သို့အဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေဖြစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်ဤထုတ်ကုန်အချို့မော်ဒယ်များကိုကူညီပေမယ့်အားကောင်းလိင်နဲ့တူလို့မရပါဘူးကြောင်း, ခေါ်ဆောင်သွားစပ်နှင့် seductive ဖြစ်ကြသည်။
မိန်းမတို့အဘို့ပထမဦးဆုံး nightgowns အဆိုပါ XV ရာစုအတွင်းထင်ရှားလျက်, ကြောင့်ရှေ့တော်၌ထိုမိန်းမပျိုတပြင်လုံးကိုတစ်နေ့ကုန်သောတူညီအဝတ်အစားတွေအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ပြုလုပ်စရာမလိုဘဲအိပ်သွား၏။ ဤအတောအတွင်းနေစဉ်ထိုထုတ်ကုန်များကိုသာမျှတတဲ့လိင်၏အဖွဲ့ဝင်များဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည် - သူတို့တစ်တွေအလွစျေးကြီးကုန်ကျသောကွောငျ့, သူတို့သိမှသာအဆင့်မြင့်ဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်နိုင်ဘူး။ ဆယ်ငါးရာစု Babydoll သိပ်သည်းမြက်ခင်း၏ဖန်ဆင်းပြီးအလွန်အနည်းငယ်အလှဆင်ဒြပ်စင်ခဲ့ရတယ် - ခြွင်းချက်တခုကိုဇာသို့မဟုတ်ကြီးမားသောခလုတ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ XIX ရာစုအတွင်းလက်ခံရရှိကျယ်ပြန့်အလားတူဗီရိုပစ္စည်းများ။ ဝါဂွမ်းနှင့်ပိတ်ချော, ပိုး, ဖဲနှင့်အခြားပစ္စည်းများအနေဖြင့်ဤနေရာတွင်ထည့်သွင်းရွေးချယ်မှုများ - သူတို့ရဲ့အကွာအဝေး၏ဤအချက်ကနေတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ ကနေ - တစ်ဦးချင်းစီရာသီသစ်နှင့်အတူ, ထုတ်ကုန်အသစ်အရောင်များရှိကြ၏ ပျော့ pastel တောက်ပနှင့် "အော်ဟစ်" အရောင်များကို၎င်းထိုသို့ပယ်ရှားကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခဲ့ရာမှ။ ယနေ့တွင်အမျိုးသမီးတွေလှပသော nightgowns ကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးအတွက်တင်ပြနေကြတယ်, ဒါကြောင့်တိုင်းဖက်ရှင်ကိုမိမိတို့အဘို့အရာတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အပိုး nightgown - ထိုနှစ်သက်အထင်ကြီးချင်တဲ့သူတွေကိုအမြိုးသမီးမြားအတှကျစံပြရွေးချယ်မှု။ ဒီအချက်တွေမော်ဒယ်မဆိုအသက်အရွယ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားမင်းသမီးများအတွက်ထူးထူးခြားခြားလှပသောဣတ္ image ကိုဖန်တီး, ဇိမ်ခံစျေးကြီးနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် seductive ကြည့်ရှုပါ။ သဘာဝကပိုးထုတ်ကုန်များ၏နောက်ထပ်အားသာချက်ကိုသူတို့အိပ်နေစဉ် crumple ကြဘူးကြောင်း, ဒါကြောင့်ပင်နံနက်ယံ၌မိန်းမပျိုကြီးမြတ်ကြည့်ရှုမည်။
Bedgown - လဲမှို့
ချစ်စရာကောင်း nightgowns ဝါဂွမ်းအကောင်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အသားအရေကိုရှူရှိုက်ခွင့်ပြုပါ, ဒါကြောင့်သူမချွေးပါဘူးအိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်းအဆင်မပြေခံစားရပါဘူး။ ထိုထုတ်ကုန်လုံလောက်သောသိပ်သည်းမှုရှိသော်လည်း, သူတို့သည်ပင်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီညများအတွက်သင့်လျော်ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးလှောင်ခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်ကျသွား၏ဖြစ်စဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်တစ်ဦးအမျိုးမျိုးအလွန်ကျယ်ပြန့်သည် - တစ်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့နှင့်အတူ-အိပ်ပျော်ခြင်းပူးတွဲဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုအဆင်ပြေပြေနဲ့စုံစုံဆောင်းပါးများနှင့်သှေးဆောငျရှေးခယျြစရာအဖြစ်တင်ပြထားသည်။
ထဲမှာပါတဲ့ - အိပ်ပျော်ခြင်းအဘို့အဝတ်အစားများအတွက်အလွန်ကောင်းစွာသင့်လျော်သောအရာအကြမ်းခံများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်း။ ကြောင့်ဆန့်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်ကြည့်ဆုံးရှုံးမရှိဘဲအလွန်ရှည်လျားပင်ပန်းခံရဖို့သူမ၏ nightgown ၏ထည်၏ပိုင်ထိုက်သောရန်။ ဒါကြောင့်လည်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဟန့်တားပါဘူးကြောင့်မြင့် elasticity ၏နှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး, ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမလုံးဝအဝတ်အချည်းစည်းသောခံစားချက်ရှိစေခြင်းငှါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထဲမှာပါတဲ့ - ကထဲကတစ်ဦးအလွန်အလင်းပစ္စည်းနှင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပင်ရှည် nightgown ကိုမဆိုဝန်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ညဥ့် calico ရှပ်အင်္ကျီရိုးရှင်းသော, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, စိတ်ဝင်စားဖွယ်လှပါတယ်။ အလွန်မကြာခဏ, ဒီပစ္စည်းကိုတစ်ဦးရင်ခုန်စရာနှင့်ကြော့လမ်းကိုဖန်တီးရန်ကနေဗီရိုပစ္စည်းများကိုအောင်, အပွင့်ဆောင်ပုဒ်အပေါ်တစ်ဦးဣတ္ပုံနှိပ်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, chintz ၏မော်ဒယ်များဿုံသည့်ခါးဆစ်နှင့် Round အလေးပေး အမျိုးသမီးကိန်းဂဏန်း၏ အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲအလငျး၌ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ "Pyshechki" ဝါဂွမ်းကုန်စည်ရှည် nightgown သွားနိုင်ပါတယ် - ကအမြင်အာရုံဟာချို့ယွင်းချက်ဖုံးကွယ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ် hoodie တူမည်မဟုတ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ဖက်ရှင်လောကရှိလူသိများ Cambric nightgowns သို့သော်သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၏အချိန်အဘို့, သူတို့ကသိသိသာသာပြောင်းလဲပစ်ရန်စီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိမော်ဒယ်ဒါအပေါ် INSERT, crystals ၏ပုံစံများ, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပန်းသို့မဟုတ်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်ခြားနား, ရိုးရှင်းပြီးစုံစုံနှင့်ကြွယ်ဝစွာဇာနှင့်အတူအလှဆင်, ရှည်လျားသို့မဟုတ်အတို, ဖြောင့်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟုနိုင်ပါတယ်။
မြက်ခင်းထဲကနေ Babydoll အမြဲနှစ်သိမ့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုပေးပါသည်။ ဆောင်းရာသီနဲ့ Demi-ရာသီကာလ၌အတော်လေးအအေးလုံလောက်သောသိပ်သည်းမှုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ပူမဟုတ်နွေရာသီ၌တည်၏။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်အမြင်အာရုံအချို့သောကိန်းဂဏန်းအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်, ဒါကြောင့်သူတို့ကမည်သည့်အသက်အရွယ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားအဆင်းလှသောလိင်မှရရှိနိုင်ပါသည်။
မယုံနိုင်လောက်အောင်လှပသောညဥ့်ဝတ်ရုံဖဲ၏လုပ်ကြသည် - တစ်ဦးရတဲ့အရာတွေတောက်ပမျက်နှာပြင်ရှိခြင်းတစ်ဦးပစ္စည်း။ ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၌သူတို့သည်အနည်းငယ်ကသဘာဝပိုးများ၏မော်ဒယ်များ၏ဆင်တူကြသည်, သို့သော်မျှတတဲ့လိင်အများအပြားပိုပြီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်မှာမရရှိနိုင်ကြသည်။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါပိုးထုတ်ကုန်မတူဘဲ ဖဲရှပ်အင်္ကျီ ဒါကောင်းသောယိုစိမ့်လေထုမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီရာသီဥတုအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဗီရိုဤ savory ပစ္စည်းများကွဲပြားခြားနားသောအထည်နှင့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်လည်း nightgowns ၏စတိုင်များအမျိုးမျိုးမသာဆွဲပြီးချုပ်ပေးရတယ်အခါ, အရာတစျခုစီပြီးသားအများအပြားပရိတ်သတ်တွေရဲ့နှလုံးသားများအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသက်ကြီးသောမိန်းမတို့အများအားဖြင့်အဆင်ပြေထုတ်ကုန်ကိုရှေးခယျြနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် မူတည်. မိမိတို့၏စတိုင်ကိုပြောင်းလဲ, ထိုအံဆွဲထဲမှာငယ်ရွယ်ဖက်ရှင်နီးပါးအမြဲအိပ်ဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ seductive အဘို့မသာဒီဇိုင်းအချို့လက်ရာမြောက်သောမော်ဒယ်များကိုတင်ပြပါ။
နီးပါး nightgowns အမျိုးမျိုးတို့ကို, တွေဆီကနေထောက်ခံမှုခွက်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ရင်သားအိပ်နေစဉ်အပန်းဖြေဖို့ခွင့်မပြုပါဘူး။ ဤအတောအတွင်းလူသိများတဲ့ထုတ်လုပ်သူများ collection များကိုထဲတွင်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုမှအာရုံစိုက်ထားတဲ့ခွက်နဲ့ options တွေနဲ့တင်ဆက်ထားပါသည်။ ထိုထုတ်ကုန်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆုံရပ်များအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ချစ်နှင့်အတူရင်းနှီးဂိမ်းသို့သော်အိပ်ရန်အကူးအပြောင်းကိုသူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကြိုးမပါခြင်းနှင့်ခပ်သိမ်းသောကာလအဘယ်သူမျှမအီ Wear ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်တစ်ခုပိုအဆင်ပြေမော်ဒယ်မှပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာနှင့်အတူအလှဆင် sexy nightgowns, တစုံတယောက်သောသူသည်တခုတခုအပေါ်မှာအထင်အမြင်စေနိုင်သည်။ ဤသည်ဣတ္ပုံစံမျိုးအများအပြားရာစုနှစ်များစွာများအတွက်ဖက်ရှင်လောကရှိလူသိများသည်, ထိုကာလအတွင်းမှာသူက၎င်း၏ဆီလျော်မှုမဆုံးရှုံးခဲ့ပေ။ အိပ်စက်ခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအမျိုးသမီးဗီရို၏အလှဆင်ပစ္စည်းများသည်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဇာအောက်ဆုံးဒါမှမဟုတ်ရင်သားအောက်တွင်တည်ရှိသည်။ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြည့်နှင့်မော်ဒယ်များ ဇာနှင့်အတူ ပနျးပှားကိုမြှမှာနှင့်အင်္ကျီလက်ဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင်အချို့သောအမျိုးသမီးများကိုလုံးဝနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဣတ္ဇာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ညဥ့်ဇာရှပ်အင်္ကျီတို့သညျတွန်းလှန်လိုသောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်စေနှင့်၎င်းတို့၏အကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအနည်းငယ်ထွန်းလင်းနိုင်ပါ။ ဇာအနက်ရောင်သို့မဟုတ်တောက်ပအနီရောင်၏လုပ်အထူးသဖြင့်အထင်ကြီးစရာကြည့်ထိုကဲ့သို့သောဗီရိုပစ္စည်းများ။ သူမ၏မင်္ဂလာဆောင်ည Young ကသတို့သမီးထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အရောင်ဖျော့ဖျော့အရိပ်မဆို၏ပြတ်သားအဖြူတင်ဒါပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ချစ်စရာကောင်းအတိုနှင့်တာရှည်အမျိုးသမီးများ၏ nightgowns အမြဲပန်းပွင့်နှင့်ပေါ်၌ပန်းရောင်းဆောင်ပုဒ်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များ၏ပုံရိပ်များကလွှမ်းမိုးသောအကြားကိန်းဂဏန်းများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လူငယ်မိန်းကလေးများမကြာခဏစိတ္တဇဒီဇိုင်းများ, ရုပ်ပြသို့မဟုတ်ကာတွန်းထဲမှာဇာတ်ကောင်တူတဲ့ကြောင်းပျော်စရာပုံစံများ, တိရစ္ဆာန်ထုတ်နှင့်အတူထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပန်းချီကားများ, ဒါပေမယ့်လည်းသက်ဆိုင်ရာကျောက်စာကိုသာကိုထမ်းရသောအလွန်တောက်ပနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြည့်မော်ဒယ်။ "! မင်းသမီးအရာအားလုံးနိုင်ပါတယ်" ဥပမာ, နုပျိုလှပမှုတစ်ခုမင်းသမီးလေး၏ပုံရိပ်နှင့်ရယ်စရာစာတမ်းနှင့်အတူထုတ်ကုန်ခစျြလိမျ့မညျ Romantic ရှိုငယ်ရွယ်မင်းသမီးပုံနှိပ်ပုံစံဝက်ဝံရုပ်နဲ့အဆင်ပြေရှပ်အင်္ကျီကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ - ကရိုးရှင်းစွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်နှင့်လူငယ်နှင့်အလေးအနက်ဖော်ပြနိုင်ပါတယ် Play က၎င်း၏ပိုင်ရှင်၏။
တစ်ဦး V-shaped ထစ် Nightie
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အတင့်တယ် nightgowns ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များရှိနိုင်ပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများဟာသူတို့ရဲ့ V- လည်ပင်း, လှလှပပ delineated ရင်ဘတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးစေသည်။ ဤပုံစံလုံးဝတစ်လောကလုံးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကြက်သရေအထီးကျန်မှုတွေအတွက်အိပ်ပျော်နေသောအဘို့နှင့်သူမ၏ချစ်သူကိုနှင့်အတူမတ်ေတာ၏တညဉ့်အဘို့သင့်လျော်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီထုတ်ကုန်ရင်ဘတ်မှမဆိုအပိုဆောင်းထောက်ခံမှုမလိုအပ်ပါဘူး - ဒါကြောင့်ပင်ဘရာစီယာမပါဘဲ, မည်သည့်အရွယ်အစား၏တွေဆီကနေအပေါ်အကြီးလှပါတယ်။
အလွန့်အလွန် seductive နှင့်သှေးဆောငျနေတဲ့ပုံလုပ်နေတာစဉ်ကညဉ့်အဘို့သက်သာခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ပေးသည်ကြောင့်ပေါင်းစပ်, အဆင်းလှသောလိင်အကြားအထူးသဖြင့်ရေပန်းစားသည်။ ထိုသို့သောထုတ်ကုန် - လက်ထပ်မိန်းမတို့အဘို့တစ်ခုစံပြ option ကိုပြုလုပ်သာမန်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောအဘို့နှင့် lovemaking နှင့်ရင်းနှီးသောခြော့များအတွက်သင့်လျော်သောကြောင့်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ပေါင် - ပုံမှန်အားဖြင့်, ဇာ, ပိုးသို့မဟုတ် sem လုပ်ထားတဲ့ပေါင်းစပ်ပျမ်းမျှအလျားရှိသည်။ ဒါကစတိုင်ချစ်ရာသခင်သည်ရှည်လျားသေးသွယ်ခြေထောက်သရုပ်ပြအမျိုးသမီးတွေကိုကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်သူကအောက်တန်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လည်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထားဘူး။ အရောင်အစီအစဉ် နှင့်သေဒဏ်စီရင်ပေါင်းစပ်၏ stylist မျိုးကွဲမယုံနိုင်လောက်အောင်ကွဲပြားခြားနားကြသည် - vamp ခံစားရဖို့ခွင့်ပြုသည့်အံ့မခန်းမော်ဒယ်, - လှပသောအမျိုးသမီးအကြားအလွန်ရေပန်းစားနေတဲ့နူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်အပြစ်ကင်းစင်နှင့်အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင် emanates ရာမှတစ်ဦးအဖြူ nightgown, ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
သားမွေးနှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင် - မူလ finish ကိုအတူဖက်ရှင်စတိုင်များ
လူငယ်အကျီ - ပြုလုပ်ခြင်းသည်စတိုင်လေး Create
နွေရာသီဖိနပ် - ဒီနွေရာသီအဘို့အပါဆုံးဖက်ရှင်နဲ့စတိုင် pair တစုံ
ပွင့်လင်း INSERT နှင့်အတူဖိနပ်
ကြမ်းပြင်မှရှည်လျားသောဆင်မြန်း - အလှဆုံးနှင့်ဖက်ရှင်ညဦးနှင့်ပေါ့ပေါ့ဆင်မြန်း
ရေယုန် labialis များအတွက်ရိုးရာကုစား
အက်စပရင်ကိုကူညီပေးသည်သောအရာကို မှစ. ?
Mayonnaise အပေါ် Pie
မုန်လာဥနီ - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး
စကားပြန် Dream - မင်္ဂလာဆောင်နှင့်ဆက်စပ်အိပ်မက်ဆိုလိုသောမင်္ဂလာဆောင်?
မျက်တောင် - အကျိုးဆက်များ
အကြောင်းရင်းများ - ရှူရှိုက်ရန်ခဲယဉ်း
သိုင်းရွိုက် - ဟော်မုန်း
မည်သို့ကလေးတစ်ဦးတစ်ဦးမွေ့ရာကိုရွေးချယ် - စဉ်းစားရကျိုးနပ်ပါသောသူအပေါင်းတို့တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ
ဘောလုံးလယ်ပြင်ပေါ်ဓာတ်ပုံ session တစ်ခု